Faransiiska - ALinks
Maqaallada ku saabsan Faransiiska
December 18, 2020 Antika Kumari France, shaqo
Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay ardayda ajinebiga ah ee qalin jabisa inay shaqo fiican ka helaan Faransiiska. Waxay kuxirantahay dhalashada qofka, qofku uma baahnaan karo ogolaansho deganaansho ku meelgaar ah. Joogitaanka Faransiiska markaad Qalin jabineyso iyo helitaanka Shaqo maahan wax badan
Sidee loo helaa guri ku yaal Faransiiska?
December 2, 2020 Antika Kumari France, guryaha, safarka
Faransiiska gudaheeda, kireysiga guri ama aqal ayaa aad uga caansan iibsashada, gaar ahaan kuwii hore. Haddii joogitaankaagu yahay mid ku-meel-gaadh ah, waxay u badan tahay inuu yahay dookhaaga ugu fiican, maadaama iibsashada guryaha ay noqon karto mid aad qaali u ah. Si kastaba ha noqotee, haddii tani ay tahay waddo
September 29, 2020 Maitri Jha France, fiisada
Nidaamka dalabka Visa-ha ayaa maalmahan loo qabtay si habsami leh. Qaar ka mid ah waddammada waxay bixiyaan codsiyo khadka tooska ah ee fiisooyinka ah iyo qaar qadka ka baxsan. Xaaladda Faransiiska, dalabka fiisada waa inuu ku dalbadaa bogga internetka. In kasta oo
Intee ayey kugu kici doontaa inaad ku noolaato Faransiiska
Waxaa laga yaabaa 23, 2020 Shubham Sharma France
Intee in leeg ayaad ku bixisaa kharashka nolosha ee Faransiiska bil kasta waxay ku xirnaan doontaa noloshaada gaarka ah iyo halka aad qorsheyneyso inaad degto. Ikhtiyaar u helida nolosha sare ee Paris waxay u badan tahay inay godad waaweyn ka sameyso miisaaniyad kasta
Maalgeli Lacagtaada Bangiyada ugu wanaagsan ee Faransiiska
Waxaa laga yaabaa 22, 2020 Shubham Sharma France, lacag
Nidaamka bangiyada Faransiiska ayaa ah midka ugu awooda iyo nidaamsan nidaamka bangiyada adduunka. Faransiiska ayaa leh laamo ku dhawaad ​​dhammaan bangiyada caanka ah ee adduunka. Dalku wuxuu leeyahay in kabadan 550 banki wadarta. 300 oo ka mid ah kuwan
Ku wanaagsanaanta dalka Faransiiska oo leh hudheelada ugu fiican Magaalada
Waxaa laga yaabaa 20, 2020 Shubham Sharma France, hotels, safarka
U safridda Faransiiska had iyo jeer waa safar xiiso badan dariiq kasta. Faransiiska waxay leedahay qaar ka mid ah muuqaallada neefsiga ee adduunka. Magaalada caasimada ah ee Faransiiska, Paris ayaa si fiican loogu yaqaanaa Magaalada Jacaylka. Dalxiisayaal badan ayaa doorta Paris
Baadhitaanka Faransiiska, oo leh Gaadiidka ugu Fiican
Waxaa laga yaabaa 19, 2020 Shubham Sharma France, soo qaado, safarka
Gaadiidka gudaha Faransiiska waa wax cajiib ah oo waliba ugu fiican Yurub. Shabakada Wadada ee Faransiiska ayaa ah tan ugu isticmaalka badan waana mid kamid ah shabakadaha ugu cufan adduunka sidoo kale. Paris waxaa loogu talagalay inay noqoto xarunta iyo shabakadda gadiidka
Liiska Isbitaalada wanaagsan ee Faransiiska
April 29, 2020 Shubham Sharma France, caafimaadka
Runtii waxaa jirta oraah caan ah oo leh "Isbitaalada ayaa maqla tukashada ugu badan". Isbitaaladu waa hay'adda daryeelka caafimaadka si loogu daaweeyo bukaanka cuduro dhowr ah. Daryeelka Caafimaadka Faransiiska iyo tas-hiilaadka caafimaad waa kuwa ugu fiican adduunka oo dhan.
Ka hel waxbarasho sare Jaamacadaha ugu fiican Faransiiska
April 27, 2020 Shubham Sharma France, waxbarasho
Waxa ugu horreeya ee ka dhigaya Faransiiska mid cajiib leh waa Eiffel Tower. Waxa labaad oo ku caan baxay Faransiiska waa sharaf iyo qiime u gaar ah. Dowladda Faransiiska ayaa kor u qaaday nidaamkooda waxbarasho xilliyadii hore
Sida loo dalbado magangalyo Faransiiska
April 20, 2020 Shubham Sharma France, qaxootiga
Ka raadinta magangalyo Faransiiska, waxaad ka heli kartaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan magangalyada Faransiiska. Halkan maqaalkan, ujeedkeenna ugu weyni waa inaanu bixinno macluumaadka magangalyo doonka. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad rabto macluumaad ku saabsan magangalyada wadan kasta, waad ku caawin kartaa